Ahoana ny fomba fampandehanana hitsin-dàlana mba hampandrenesana ny tranga maika ao amin'ny EMUI | Androidsis
Betsaka ny tetika miasa misy an'i EMUI, sosona azonao ampanjifaina tanteraka rehefa manomboka mampiasa azy io amin'ny fitaovanao Huawei / Honor. Anisan'ireo zavatra maro azontsika tratrarina mihidy apps amin'ny teny miafina, asio sonia eo amin'ny efijery hidin-trano, ankoatra ny zavatra hafa.
ihany koa azontsika atao ny mampandeha hitsin-dàlana mba hampandrenesana ireo tranga maika ao amin'ny EMUI, ilaina ny mahita ny tenantsika anaty toe-javatra lehibe na mila miantso olona akaiky anao. Izany dia hahatonga izany amin'ny iray amin'ireo toe-javatra azonao iantsoana amin'ny fomba haingana kokoa ary amin'ny alàlan'ny fanindriana ny telefaona ignition im-dimy fotsiny.
Ny mpanamboatra hafa dia nametaka hitsin-dàlana rehefa niantso ny nomeraon'ny vonjy taitra maimaim-poana, miankina amin'ny tsirairay amin'izy ireo ny fanaingoana. Ao amin'ny Huawei / Honor dia afaka manamboatra zavatra marobe amin'ireo safidiny isika, tsara kokoa ny mametraka azy ao anaty filaharana tadiavinao fa tsy ilay tonga tampoka, fa tadidio foana.
Haingam-pandeha ny activation, noho io dia tsy maintsy mandeha any amin'ny toerana misy anao ianao ary avy eo ianao dia afaka mandefa SMS fanampiana amin'ireo olona mifandray aminao mba hampandre azy ireo fa ao anatin'ny toe-javatra matotra ianao. Na ny roa amin'izy ireo dia mety mitombina ary izany no antony tsara indrindra handrindrana azy irery.
Raha te hampandeha hitsin-dàlana sy hampandre ny fisian'ny vonjy taitra ao amin'ny EMUI, dia toy izao manaraka izao:
Ampidiro ny Fikirakira ny fitaovanao finday
Midira amin'ny safidy "Security" ary tsindrio ny "SOS Emergency"
Eto ianao dia afaka misafidy hanao antso amin'ny iray amin'ireo olona mifanerasera maika aminao, azonao atao ny manamboatra azy io
Hahafahanao mandefa SMS mailaka amin'ny iray amin'ireo olona ifandraisanao koa, amboary ny telefaona, fa io no tokony hampiasanao azy
Ny tsara indrindra dia ny mitazona ny antso amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra herinaratra indimy
Ity dia iray amin'ireo fiasa tokony ho fantatrao momba ny EMUI, sosona iray izay nihatsara be rehefa mandeha ny fotoana ary miaraka amin'ny fandehan'ireo kinova dia manatsara ny fahombiazany. Huawei / Honor dia efa mitsapa ny HarmonyOS 2.0 Beta amin'ireo maodely tohana, ao anatin'izany ny Huawei P40 Pro, Huawei P40, Huawei Mate 30, Mate 30 Pro ary MatePad Pro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba fampandehanana hitsin-dàlana mba hampandrenesana ireo tranga maika ao amin'ny EMUI
Ahoana no tsy hahamarino ny fampandrenesana amin'ny tantaran'ny Android 11
Huawei Mate 40E: endri-javatra tafaporitsaka an'ny finday manaraka Kirin 990 5G an'ny Brand